Sakamalaho | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fomba hanamboaran-doha ao anaty vilany iray: fambolena sy fikarakarana voly
Azo antoka fa sarotra ny fiantsoana ny tranon'ilay biby. Mihevitra ny mpikaroka sasany fa ny toeram-ponenany voajanahary dia India, ny hafa - Azia atsimo atsinanana. Ankoatra izany, sarotra ny miteny na dia hoe avy aiza izy avy any amin'ny taninay: avy any Andrefana na Atsinanana. Androany dia ampiasaina amin'ny fitsaboana, ny sakafo, fa ny fambolena ao an-trano dia tsy voatery foana.
Ny akora simika amin'ny ginger: ny toetra mahasoa sy ny fanoherana
Ny ginger dia solontenan'ny flora. Ampiasaina ao amin'ny sakafo sy ny fitsaboana izy io. Niaraka taminay izy, dia nitsahatra tsy nieritreretana azy. Nefa ity zavamaniry ity dia fantatra amin'ny olombelona mandritra ny roa arivo taona mahery. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fananganana, ny fananana sy ny fiantraikan'ny ginger amin'ny vatana. Ny ginger: ny akora simika ao amin'ny zavamaniry Ginger dia ahitana rano, be dia be ny mineraly ilaina (magnesium, phosphorus, calcium, sodium, vy, zinc, potassium, chromium, manganese, silicium), vitamins (A, B1, B2, B3, C, E, K), siramamy (oleic, capryl, linoleique), proteinina, anisan'izany ny amino asidra (leucine, valine, isoleucine, threonine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan), asparagine, asid glutamic, as well as fat, hydrogen (sugars).
Ahoana no mahasoa ny dite ny zavamaniry, ary manimba izany
Ny dite ginger dia fisotroana izay hanampy anao hahazo ny fepetra ara-batana ilaina sy ny firindrana ara-panahy. Nampiasaina tamin'ny fanasitranana fahiny an'i India sy i Shina izany, izay nipoitra tany Eorôlà taty aoriana ary tonga tamin'ny androntsika amin'ny endrika tsy miova. Ny divay ginger Manerana izao tontolo izao dia misy karazany telo karazana ginger, ary ny karazan-dite isan-karazany - ary tsy hitanisa.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Sakamalaho